ဘဲသားဆီပြန် | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
ဘဲသားက မချက်တတ်ရင် ညှီတတ်ပါတယ်။ ဘဲသားလိုအသားဟင်းမညှီစေရန် ဆီသတ်ချိန်မှာ မွှေးနေအောင် စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် သတ်ရန်လိုပါတယ်။ဒီနည်းလေးမှာတော့ မညှီအောင်ရော အိုးကြီးချက်မဲ့ အချိုးအစားကိုရော ရေးပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ( လူ၅၀-၈၀ ခန့်)
– ဘဲအသားဆူဆူ ၁၀ ကောင်ခန့်
-ငရုတ်သီးခြောက် တောင့် ၁၀ တောင့်
-ဂျင်း ၂၀၀ ဂရမ် ၊ ၂၀ကျပ်သား ခန့်
-ကြက်သွန်နီ ၂ကီလို – ၁ပိသာခွဲခန့် (အနှစ်များများချက်ရန်)
-ကြက်သွန်ဖြူ ၅၀၀ ဂရမ် – ၃၀ကျပ်သားခန့်
–အရောင်တင်မှုန့် ၅၀ ဂရမ်
-ဆနွမ်းမှုန့် ၅ ဂရမ်
-ဆား၊ ကြက်သားမှုန့် (နှစ်သက်သလို)
ဘဲကိုသန့်စင်ရေဆေးကာ အတုံး ညီညီတုံးပေးပါ။ ၊ ဂျင်း ၁၀၀ဂရမ်၊ ဆနွမ်းနဲနဲ ၊ ဆား၊ အသားမှုန့်တို့ဖြင့်ဘဲ အသားထဲအရသာဝင်အောင် ဆုပ်နယ်ပေးထားပါ။
ထုံးစံအတိုင်း ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူတို့ကို ထောင်းထား(ကြိတ်ထား) ပေးပါ။ ဒယ်ပေါ်ဆီပူလာရင်ကြက်သွန်များကို စပြီးထဲ့ပါမယ်။ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်တို့ လိုသလိုထဲ့ပါ။ လက်ကျန် ဂျင်း၊ ပျဉ်တော်သိမ်၊ ဆနွမ်း၊ အရောင်တင်မှုန့်တို့ကိုပါ ထဲ့ပြီး ဆီသတ်ပါ။အနံ့မွှေးပြီး ကြက်သွန်များ ကြွပ်လာပြီဆိုရင် ငရုတ်အပွခြောက်များထဲ့ကြော်ပါ။ အနံ့ပိုမွှေးလာပါမယ်နော် ။
ငရုတ်သီးခြောက်များ ကျွတ်ပြီးပြောင်လာရင် နယ်ထားသောဘဲသားကို ထဲ့ လုံးပေးပါ။ ဘဲကထွက်သောအရည်နဲ့ပဲ ဆက်လုံးပေးရင်း ဆီပြန်လာတာတွေ့ရပါမယ်နော်။
အဲဒီအခါမှ ရေကိုအသားမြုပ်အောင်ထဲ့ ပြီးနူးသည်အထိ မီးအေးအေးဖြင့် အဖုံးအုပ်တည်ပေးပါ။ ဆီပြန်ပြီး ဘဲသားနူးရင် အရသာအပေါ့အငံမြည်းကာ မဆလာဖြူးပြီ်း အရသာရော အနံ့ရောပြည့်စုံတဲ့ဘဲသားဆီပြန်ဟင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ (ဘဲသားက အလိုလိုဆီထွက်တတ်သောကြောင့် ဆီလျှော့ထဲ့နိုင်ပါတယ်)
10 comments on “ဘဲသားဆီပြန်”
12/12/2013 @ 4:07 am
Thank you eithet. It look very delicious.
Thanks again, Aye Mar
12/12/2013 @ 5:38 am
ကောင်းလိုက်တဲ့ဟင်း အံတီကဘဲသားဆိုအလွန်ကြိုက် ငြုပ်ပွကြော်ကိုတစ်ချိန်လုံးထဲ့ချက်ထားရမလား
12/12/2013 @ 12:58 pm
ဟုတ် အန်တီရေ သူ့ဘာသာသူအနှစ်ဖြစ်သွားပါမယ်
12/12/2013 @ 7:37 am
Sister, long time no see. I like yr cooking duck curry recepie. Thanksalot.
12/12/2013 @ 3:52 pm
Thank you for sharing your cooking and I really like to try but i can’t get
any burmese font on my email. I had download the zawgyi font already and
still show. I’ve been searching for bain maoh receipt and i saw you had it.
Win win hlaing.
13/12/2013 @ 4:38 pm
pls , use internet expore 🙂
18/12/2013 @ 8:00 am
ကျေးဇူး မအိသက်…ဇာခြည် ဘဲသားအရမ်းကြိုက်တယ်။ ချက်တိုင်း တခါမှ စိတ်တိုင်းမကျဘူး။ မ နည်းအတိုင်းချက်ကြည့်ဦးမယ်..ဒါနဲ့ ငံပြာရည်မထဲ့ရဘူးလားဟင် အမ?
21/12/2013 @ 2:36 am
no , i did not 🙂
26/12/2013 @ 3:07 am
Thank you, sis. I will try…hee heee. Now I really wanna go back and cook.
27/04/2014 @ 10:48 am
LeaveaReply to Zarchi Cancel reply